Nolosha Kamuunka Fagersta | Somaliska
Fagersta waa magaalo / kamuun yar oo ka tirsan gobolka Västmanland ee bartamaha Sweden ayadoo u jirta 2 saac caasimada Stockholm, magaalada Fagersta ayaa waxaa ku nool ilaa 12,000 oo qof ayadoo bilowgii sanadkaan ay Soomaalidu aad ugu soo bateen. Guryaha: Arinta ugu muhiimsan ee Soomaalida ku soo jiidata magaalada Fagersta ayaa ah ayadoo guryaha si sahal ah looga helo, helitaanka guryaha ayaa inta badan qaata mudo bil ka yar ayadoo ay jiraan dhowr shirkadood oo guryaha laga raadsado. Qofka marka uu yimaado Fagersta ayaa laga doonayaa in uu iskiis u raadsado guri oo kontrakt soo saxiixo. Kirada guryaha ayaa u dhaxeysa 2000-2500KR halka qol, labada qol ayaa u dhaxeysa 27,00KR ilaa 35,00 KR. Waxbarashada: Magaalada Fagersta waxaa ku yaala dhowr iskuul balse ma leh wax koleej ama jaamacad ah, marka laga soo tago waxbarashada caruurta iyo dugsiyada sare waxaa sidoo kale ku yaal magaalada iskuul lagu barto maadada Swedishka (SFI) dadka ku cusub magaalada ayay waajibtahay in ay sugaan 3 bilood inta aan SFI loo dirin. SFIga ayaa la dhigtaa 4 saac maalintii ayadoo dadka khaar ay dhigtaan galab ama subax. Shaqada Iyo Baraatiiga: dhinaca shaqada ayay magaalada Fagersta kala mid tahay inta badan Sweden ayadoo aysan ka jirin wax shaqo ah balse ay jiraan dhowr qof oo Soomaali ah oo ka shaqeeya kamuunka balse inta badan dadka ku nool magaalada waa shaqo la´aan, arinta ugu daran ee dadka Soomaalida ay ka eed sheegtaan ayaa ah waxa kamuunku yugu yeeraan Baraatiiga, ayadoo qofkasta ee kamuunka yimaada ay u diraan Baraatiig qasab ah oo 4 saac ah haddii aad iskuul dhigatid haddii kalena waa 8 saac. Dadka ayaa ka shaqeeya sida in ay cowska jaraan, guryaha nadiifiyaan, waayeelka oo ay gabdhaha daryeelaan iyo shaqooyin kale oo hoose. Fagersta kama jiraan Baraatiig xirfad ah oo dadka aqoontooda wax loogu diro inta badana dadka markaan loo hayn wax ay qabtaan waxaa lagu hayaa meel warshad ah oo aysan ka bixi karin. Soomaalida Fagersta ayaa aad uga eedsheegata shaqada Baraatiiga balse maamulka kamuunka ayaan arintaas dhag jalaq u siin. Nolosha Guud: Nolosha guud ee magaalada Fagersta ayaa iska caadi ah waloow ay maciishadu qaali tahay, ayadoo ay adagtahay in laga helo hilib raqiis ah. magaalada ayaa waxaa ku yaala dhowr dukaan oo waaweyn sida COOP, LIDL iyo ICA ayadoo dukaanka COOPka uu gado cunto xalaal ah balse ay qaali tahay. Sidoo kale waxaa magaalada ku yaal dukaan cusub oo uu furtay wiil Soomaaliyeed oo gada cuntada xalaasha. Bulshada Soomaaliyeed ee Fagersta ayaa sidoo kale waxay leeyihiin jaaliyad ay doorteen balse aan wali wax qaban maadaama ay cusubtahay. Isku Socodka iyo Gaadiidka: Magaalada Fagersta waxaa yimaada oo ka baxa tareeno saacadkasta ayagoo isku xira Västarås iyo magaalooyinka kale ee u dhadhow. Magaalada ayaa sidoo kale waxay leedahay basas waloow aysan Soomaalidu raacin maadaama ay kaarkeedu qaaliyay ayna iska yar tahay magaaladu. Inta badan dhalinyarada ayaa raaca baaskiilka ama lugeeya. Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Adiguna waxaad noo soo diri kartaa warbixin ku saabsan nolosha kamuunka aad ku nooshahay.
Nolosha Kamuunka Fagersta
Fagersta waa magaalo / kamuun yar oo ka tirsan gobolka Västmanland ee bartamaha Sweden ayadoo u jirta 2 saac caasimada Stockholm, magaalada Fagersta ayaa waxaa ku nool ilaa 12,000 oo qof ayadoo bilowgii sanadkaan ay Soomaalidu aad ugu soo bateen.
Guryaha: Arinta ugu muhiimsan ee Soomaalida ku soo jiidata magaalada Fagersta ayaa ah ayadoo guryaha si sahal ah looga helo, helitaanka guryaha ayaa inta badan qaata mudo bil ka yar ayadoo ay jiraan dhowr shirkadood oo guryaha laga raadsado. Qofka marka uu yimaado Fagersta ayaa laga doonayaa in uu iskiis u raadsado guri oo kontrakt soo saxiixo. Kirada guryaha ayaa u dhaxeysa 2000-2500KR halka qol, labada qol ayaa u dhaxeysa 27,00KR ilaa 35,00 KR.
Waxbarashada: Magaalada Fagersta waxaa ku yaala dhowr iskuul balse ma leh wax koleej ama jaamacad ah, marka laga soo tago waxbarashada caruurta iyo dugsiyada sare waxaa sidoo kale ku yaal magaalada iskuul lagu barto maadada Swedishka (SFI) dadka ku cusub magaalada ayay waajibtahay in ay sugaan 3 bilood inta aan SFI loo dirin. SFIga ayaa la dhigtaa 4 saac maalintii ayadoo dadka khaar ay dhigtaan galab ama subax.
Shaqada Iyo Baraatiiga: dhinaca shaqada ayay magaalada Fagersta kala mid tahay inta badan Sweden ayadoo aysan ka jirin wax shaqo ah balse ay jiraan dhowr qof oo Soomaali ah oo ka shaqeeya kamuunka balse inta badan dadka ku nool magaalada waa shaqo la´aan, arinta ugu daran ee dadka Soomaalida ay ka eed sheegtaan ayaa ah waxa kamuunku yugu yeeraan Baraatiiga, ayadoo qofkasta ee kamuunka yimaada ay u diraan Baraatiig qasab ah oo 4 saac ah haddii aad iskuul dhigatid haddii kalena waa 8 saac. Dadka ayaa ka shaqeeya sida in ay cowska jaraan, guryaha nadiifiyaan, waayeelka oo ay gabdhaha daryeelaan iyo shaqooyin kale oo hoose. Fagersta kama jiraan Baraatiig xirfad ah oo dadka aqoontooda wax loogu diro inta badana dadka markaan loo hayn wax ay qabtaan waxaa lagu hayaa meel warshad ah oo aysan ka bixi karin.
Soomaalida Fagersta ayaa aad uga eedsheegata shaqada Baraatiiga balse maamulka kamuunka ayaan arintaas dhag jalaq u siin.
Nolosha Guud: Nolosha guud ee magaalada Fagersta ayaa iska caadi ah waloow ay maciishadu qaali tahay, ayadoo ay adagtahay in laga helo hilib raqiis ah. magaalada ayaa waxaa ku yaala dhowr dukaan oo waaweyn sida COOP, LIDL iyo ICA ayadoo dukaanka COOPka uu gado cunto xalaal ah balse ay qaali tahay. Sidoo kale waxaa magaalada ku yaal dukaan cusub oo uu furtay wiil Soomaaliyeed oo gada cuntada xalaasha. Bulshada Soomaaliyeed ee Fagersta ayaa sidoo kale waxay leeyihiin jaaliyad ay doorteen balse aan wali wax qaban maadaama ay cusubtahay.
Isku Socodka iyo Gaadiidka: Magaalada Fagersta waxaa yimaada oo ka baxa tareeno saacadkasta ayagoo isku xira Västarås iyo magaalooyinka kale ee u dhadhow. Magaalada ayaa sidoo kale waxay leedahay basas waloow aysan Soomaalidu raacin maadaama ay kaarkeedu qaaliyay ayna iska yar tahay magaaladu. Inta badan dhalinyarada ayaa raaca baaskiilka ama lugeeya.
Burcada internet-ka Nigeria oo cashar xanuun badan u dhigay nin Swedish ah, qiyaamay 300,000kr
Cabitaanka Pepsi oo la sheegay in alkolo ay ku jidho
October 7, 2010 at 22:17
SXB WAB SEEDKAAN SEE AMAL WAABA YAABEE SWEDEN SAAN U AQRINEYNAY SAAD MAGAALO WALABA UGU SHEEKEYNEYSEEN BUUFISKI ADUUNKAA NAGU RIDEENAA AL MIINA K ASHEEKEEYAY GABALADA WADANKEENA SEE CAMAL WAB SEEDKAAN SWEDEN AYANBA NOOGALA SHEEKEYNAA BAL ANAGANA MESHAANAA BUUFIS NAGU DILAA SXB YAAL NAGA DHAAF DEEEEEEEEEEE HADAAD ADINKA TAG TEEN SWEDEN
October 8, 2010 at 06:12
KKK sxb soo dhawoow, runtii anaga ujeedkeena mahan in aan buufis dadka ku abuurnee waa in aan caawino si ay u heli lahaayeen macluumaad ay fahmi karaan.
Warbixintaan waxay aad u anfacaysaa dadka wadankaan sharciga ka qaata ee doonaya in ay magaalo degaan. Sidoo kale dadka jooga Sweden dibadeedana waan caawinaa oo warbixino ku saabsan Socdaalka iyo Nolosha Sweden waxbaan ka qornaa.